Honda က ရှှရေောငျ ကား၊ ဆိုငျကယျနဲ အခွား ထုတျကုနျမြားကို ပွသ – Media9
Honda က ရှှရေောငျ ကား၊ ဆိုငျကယျနဲ အခွား ထုတျကုနျမြားကို ပွသ
February 5, 2019 by media9
Honda က သြစတြေးလျမှာ အခြေချတာ နှစ် ၅၀ ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ရွှေရောင် ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လမ်းကြမ်း ဆိုင်ကယ်၊ မြက်ရိတ်စက် ၊ မီးစက်များ အပါအဝင် ထုတ်ကုန်များကို ပြသလိုက်ပါတယ်။ အတိအကျပြောရမယ်ဆိုရင် Civic Type R Hot Hatchback, The Acura NSX Hybrid Supercar, HRU19 Buffalo Lawn Mower, EU22i Generator, CBR1000RR Fireblade Motorcycle, CRF450L Dual-Sport Dirt Bike နဲ့ CRF50F Kids Motorbike များ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် Anniversary အနေနဲ့သာ ဖန်တီးထားတာ ဖြစ်ပြီး သူတို့ကို ရောင်းချမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ Honda Australia ရဲ့ စီအီးအို ဖြစ်သူ Hiroyuki Shimizu က “ Anniversary မှာ ပျော်ရအောင် ပြုလုပ်ပေးတာပါ။ ရွှေ မြက်ရိတ်စက်နဲ့ ရွှေ မီးစက်ကို မြင်ရတာ အဆန်းကြီး ဖြစ်နေတယ် မဟုတ်လား ? “ လို့ ပြောပါတယ်။
ဟွန်ဒါဟာ သြစတြေးလျမှာ အရောင်းဆိုင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့မှာ နှစ် ၅၀ ပြည့်သွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟွန်ဒါက အဲဒီ ထုတ်ကုန်များကို ဖန်တီးဖို့ အတွ် မဲလ်ဘုန်း ကုမ္ပဏီ တစ်ခု ဖြစ်တဲ့ Vinyl Wraps and Graphics နဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့် ရွှေအစစ်ဖြင့် ထုတ်ကုန်များကို သွန်းလောင်းထားတာ မဟုတ်ဘဲ ဗီနိုင်းနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဟွန်ဒါက အရင်ဆုံး Gold Chrome အလွှာနဲ့ ဖုံးအုပ်ထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ပြီးတော့မှ အရောင်တောက်ပစေဖို့ Satin Film နဲ့ ကာလိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
Honda က ၾသစေၾတးလ်မွာ အေျခခ်တာ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ အထိမ္းအမွတ္ အျဖစ္ ေရႊေရာင္ ကား၊ ဆိုင္ကယ္၊ လမ္းၾကမ္း ဆိုင္ကယ္၊ ျမက္ရိတ္စက္ ၊ မီးစက္မ်ား အပါအ၀င္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပသလိုက္ပါတယ္။ အတိအက်ေျပာရမယ္ဆိုရင္ Civic Type R Hot Hatchback, The Acura NSX Hybrid Supercar, HRU19 Buffalo Lawn Mower, EU22i Generator, CBR1000RR Fireblade Motorcycle, CRF450L Dual-Sport Dirt Bike နဲ႔ CRF50F Kids Motorbike မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ Anniversary အေနနဲ႔သာ ဖန္တီးထားတာ ျဖစ္ၿပီး သူတို႔ကို ေရာင္းခ်မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ Honda Australia ရဲ႕ စီအီးအို ျဖစ္သူ Hiroyuki Shimizu က “ Anniversary မွာ ေပ်ာ္ရေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးတာပါ။ ေရႊ ျမက္ရိတ္စက္နဲ႔ ေရႊ မီးစက္ကို ျမင္ရတာ အဆန္းႀကီး ျဖစ္ေနတယ္ မဟုတ္လား ? “ လို႔ ေျပာပါတယ္။
ဟြန္ဒါဟာ ၾသစေၾတးလ်မွာ အေရာင္းဆိုင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့တာ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔မွာ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္သြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဟြန္ဒါက အဲဒီ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ဖန္တီးဖို႔ အတြ္ မဲလ္ဘုန္း ကုမၸဏီ တစ္ခု ျဖစ္တဲ့ Vinyl Wraps and Graphics နဲ႔ ပူးေပါင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ့္ ေရႊအစစ္ျဖင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို သြန္းေလာင္းထားတာ မဟုတ္ဘဲ ဗီႏုိင္းနဲ႔ ဖံုးအုပ္ထားတာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
ဟြန္ဒါက အရင္ဆံုး Gold Chrome အလႊာနဲ႔ ဖံုးအုပ္ထားတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ အေရာင္ေတာက္ပေစဖို႔ Satin Film နဲ႔ ကာလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။
ကား နိုင်ငံတကာ ပြပွဲ
စိတျပြိုကိုယျနု အရှယျတငျနစေမေယ့ျ လြို့ဝှကျခကြျ
PUBG Mobile ဆော့ဖို့ ဖုနျးသဈ မဝယျပေးသောကွောင့ျ အိန်ဒိယလူငယျတဦး ကွိုးဆှဲခြ သဆေုံး
‘ဝင်္ကပါလမ်းမများ’ဇာတ်လမ်းတွဲမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမယ့် ‘ခင်ဝင့်ဝါ’..
ပွိုငျပှဲဝငျတှကေပေးတဲ့ Crown ကို ရပွီးသားဆိုတော့ Crown နှဈခါရခဲ့တာပါဆိုတဲ့… Mrs Universe 2019 ရဲ့ Winner…
သူမဟုတျပဲဇာတျကောငျဖွဈနတေဲ့ သရုပျဆောငျကိုအမှနျကနျဆုံးဖွဈအောငျ ရှေးခယြျပေးရမှာပါ.